कलाकारको क्रियाकलापले उनिहरुमाथि नै प्रश्न, शोकको घडिमा के को हाँसो ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
कलाकारको क्रियाकलापले उनिहरुमाथि नै प्रश्न, शोकको घडिमा के को हाँसो ?
१८ आश्विन २०७५, बिहीबार ०९:५० मा प्रकाशित
बलिउड फिल्म उद्योगमा यदि कसैको मृत्यु भएमा बलिउडका कलाकारहरु सेतो पहिरनमा श्रद्धाञ्जली दिन उपस्थित भइहाल्छन् । तर कहिलेकाहीँ सेतो पहिरनमा शोक मनाउन पुगेका कलाकारहरुको क्रियाकलापका कारण उनीहरुमाथि कैयौँ प्रश्न उठ्ने गर्छन् । केही दिनअघि बलिउडका अभिनेता तथा निर्देशक राज कपूरकी श्रीमती कृष्णराज कपूरको मृत्यु भएको थियो ।
कृष्णराज कपूरको मृत्यसँगै बलिउडमा कपूर खानदानको पहिलो पुस्ताको अन्त्य भएको छ । कृष्णराज कपूरको अन्तिम संस्कारमा बलिउडका सुपरस्टार कलाकारहरु उपस्थित भएका थिए । यसैबीच आमिर खान, करण जोहर र रानी मुखर्जी पनि उपस्थित भएका थिए । यी तीनैजनाको एक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
भिडियोमा आमिर खान, रानी मुखर्जी र करण जोहर एकअर्कासँग कुराकानी गर्दै हाँसिरहेका देखिन्छन् । यो भिडियो सार्वजनिक भएसँगै ट्रोलरहरुले यी तीनै कलाकारलाई ट्रोल गर्न सुरु गरेका छन् । आमिर, रानी र करणलाई कसैको मृत्यु हुँदा यस किसिमको व्यवहार गर्न नहुने भन्दै आलोचना गरेका छन् । साथै उनीहरुमाथि ‘कमन सेन्स’ भन्ने कुरा नरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
अक्टोबर १ मा राज कपूरकी श्रीमती कृष्णाराज कपूरको कार्डीयक अरेस्टका कारण ८७ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । कृष्णा राज कपूरका ३ छोरा मध्ये रणधिर कपूर र राजिव कपूरलगायत आफन्तजन र बलिउडका अधिकांश कलाकारहरु अन्तिम संस्कारमा उपस्थित थिए ।
तर ऋषि कपूर उनकी पत्नी नीतु कपूर र रणवीर कपूर अन्तिम संस्कारमा उपस्थित हुन सकेनन् । आमा कृष्णा राज कपूरको मृत्य हुनु केही दिन अगाडि ऋषि कपूर आफ्नोे स्वास्थ्य उपचारका लागि परिवारसहित अमेरिका गएका थिए । रणवीर कपूरकी प्रेमिका आलिया भट्ट भने यस दुःखद घडीमा कपूर परिवारका साथमा थिइन् ।